Waqooyi bari Kenya shacabka oo loogu baaqay inay la dagaalamaan Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Waqooyi bari Kenya shacabka oo loogu baaqay inay la dagaalamaan Shabaab
Waqooyi bari Kenya shacabka oo loogu baaqay inay la dagaalamaan Shabaab
Siyaasiyiinta laga soo doorto degaanada waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa bilaabay olole ay dhalinyarada degaankaasi ku abaabulayeen islamarkaana ugu sheegayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen kooxaha la aaminsan yahay inay saldhigyo ku leeyihiin keynta boni oo ay ka mid tahay Al Shabaab.
Sentatorka laga soo doorto Gaarisa ayaa Yuusuf Xaaji ayaa dhalinyarada ku guubaabiyay inay ka qeyb qaataan iska caabinta ururka Al Shabaab, si degaanka uu nabad u noqdo.
Gudoomiye kuxigeenka Gaarisa Cabdi Dhaqane ayaa dhalinyarada ka dalbaday inay u midoobaan la dagaalanka Al Shabaab, wuxuuna carabka ku adkeeyay in dowladda ay ka gaabisay ilaalinta muwaadiniinta ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Safiya Cabdi oo laga soo doorto Ijara ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada booliska Kenya halka ay la dagaalami lahaayeen Al Shabaab, keliya ay hawlgal ku soo qabtaan dhalinyarada “Ma ahan wax aan u dulqaadaneyno, qofkii dambiile ah waa in la soo qabtaa oo maxkamad la soo taagaa, aniga oo Safiya ah ayaa taageeraya”
Dhalinyarada ayaa si gaar ah iyo si guud ahaaneed waxa ay dhegta ugu dhigayeen go’aamada hoggaamiyeyaasha ee ku aadan in si wadajir ah looga hortago weerarada Ururka Al Shabaab.
Al Shabaab ayaa dhacdooyin is xig xiga waxa ay ka geysanayaan gobolka waqooyi bari dalka Kenya, waxayna hada bilaabeen inay kala saaraan dadka masiixiyiinta ah iyo kuwa muslimiinta ah ee ku safra wadada weyn ee isku xirta Haluqa iyo Gaarisa.